TRINITERA: "Ry Tompo o! Ilay Endrikao no tadiaviko" (Sal 26, 8)
"Ry Tompo o! Ilay Endrikao no tadiaviko" (Sal 26, 8)
Ny 11 may 2008 lasa teo no namoahan'ny Congrégation momba ny Fiainana Voatokana sy ny Fiombonam-piainana ho amin'ny asa apostolika ny Fehin-kevitra Fampianarana momba ny FANEKENA sy ny hasarobidiny, eo amin'ny Fiainan-dRelijiozy (Jereo eto).
Vokatry ny Fivoriam-be natao ny septambra 2005 moa izy ity, ary natao hanampy na ireo miantsoroka adidy amin'ny asam-panompoana na ny tsirairay manaiky ny hotarihin'ny Fanahin'Andriamanitra.
Mizara telo miavaka tsara ity Fampianarana ity :
1- Ny Fanokanan-tenan'ny tsirairay dia fikatsahana lalandava ny sitrapon'Andriamanitra
Mila mametra-panontaniana lalandava isika ny amin'ny antony nanokanan-tena, sao sanatria noho ny hasarotry ny fiainana na noho ny tombontsoa manokana na hampifalifaly ny hafa fotsiny, tahaka ny nolazain'i Md Bernard no antony! Araka izany, fototry ny Fanekena ny Fahaiza-mihaino ny Tenin'Andriamanitra, araka ny ohatra navelan'i Kristy sy ny Fanilovan'ny Fanahy Masina. Izay nomena fahefàna hifehy araka izany dia hanaiky mandrakariva sy hikatsaka ambonin'ny zavatra rehetra ny Sitra-pon'Andriamanitra. Mazàva ny hafatr'i Ignace d'Antioche hoe :"Miandry ny fankatoavanao vao manao zavatra, saingy ianao koa, tsy hanao n'inon'inona raha tsy ankatoavin'Andriamanitra".
Araka izany di ho lohalaharana amin'ny fikatsahana ny sitrapon'Andriamanitra izay voatendry hitondra, indrindra amin'ny fampiroboroboana ny Toe-panahy manokana iainan'ny Fikambanana sy ny Fiombonana amin'ny Fiangonana, amin'ny fanentanana sy fanatsarana ny Fiainam-bavaka (ny faharetany sy ny halaliny), amin'ny fampiroboroboana ny zo maha-olona, miantomboka amin'ny rahalahy sy rahavavy iaraha-monina, satria tsy misy Fanekena vanona raha tsy misy Firahalahiana tonga lafatra. Izany no hahafahana mankahery ireo mila fanampiana...
2. Ny fanorenana ny Fiainam-pirahalahiana dia anisan'ny vaindohan-draharahan'ny Fianana Voatokana.
Ny Fifankatiavan'ny Mpirahalahy no mampisy heviny ny fiaraha-miaina, indrindra raha samy milaza fa mikaroka ny sitrapon'Andriamanitra. Manomboka ao amin'ny ankohonam-piainana araka izany ny fiainana ny Fiombonana izay tian-kijoroana ho vavolombelona eo anatrehan'ny Fiangonana sy ny tontolo.
Tsy mora anefa ny manorina izany firahalahiana marina izany, mila fahaiza-mihaino, fahavononana hifanakalo hevitra sy hifampizara andraikitra, ny finiavana hanentana ny hafa hahatsiaro tena ho tompon'andraikitra marina tokoa eo anivon'ny ankohonam-piainana... ka hahay hampiasa ny talenta ananan'ny tsirairay ho an'ny soa iombonana sy ho fivelaran'ny isam-batan'olona.
Izany no hahafahana miombo-bavaka marina sy mitondra am-bavaka ny fanapahan-kevitra rehetra, na ireo iaraha-manapaka na ireo izay tsy maintsy horaisin'ny tompon'nadraikitra, na dia mety handratra sy tsy hankasitrahan'ny sasany aza. Ny Fitiavana marina sy ny fikatsahana mandrakariva ny sitrapon'Andriamanitra no hahazoana hery hanatanterahana izany. Izay voatendry ho tompon'andraikitra dia tokony hahatsiaro ny tenin'i Kristy hoe : "Izay te ho lohany aminareo dia aoka ho ANDEVONAREO" (Mt 20,27). Mila hodinihina ny tenin'i Mb Claire nanafatra ny tompon'andraikitra tsy hampiasa fahefana loatra fa hanome oha-piainana hotahafin'ny hafa!
3. Izay fifankatiavana iainana toy ny Mpiray tampo izany dia tsy hoe fiomanana ho amin'ny iraka (mission) ihany fa efa fitoriana sahady ny Vaovao mahafaly.
Ny asam-panirahana nankinin'ny Ray amin'i Jesoa no andraisantsika anjara ihany koa. Mahatsiaro tena mandrakariva ho voairaka ary isika ka sady mitodika amin'ilay Mpaniraka no mifantoka amin'ny asa nanirahana. "Ho tonga anie ny Fanjakanao, ho tanteraka anie ny sitraponao, Ray !"
Manoloana ny fidadasiky ny asam-panirahana dia adidin'ny Mpitondra ny manentana hatrany ny tsirairay hisiki-ponitra araka izay talenta hananany avy, tsy ho amin'ny fiolonolonana samirerin'ny samy maka ho azy anefa fa hahay handrindra ny fahasamihafana ho an'ny soa iombonana, ka ho afaka hifanakalo hevitra sy hifampita vaovao hatrany.
Izany rehetra izany no tanteraka rehefa haintsika ny mandanjalanja ny fiainam-bavaka sy ny zotom-po hiasa, ka hahatsiarovana mandakariva fa amin'ny anaran'ny Fikambanana no iasana ka tsy hialona ny iraka ampanaovina ny hafa no hahazo hery avy amin'ny fanohanana sy ny Firahalahiana ao amin'ny Ankohonam-piainana. Tsy azo atao ambanin-javatra ihany koa ny fahaizana miara-miasa amin'ny laika.
Ny fiaraha-miaina anefa dia mitaky fandeferana sy famindram-po mandrakariva. Tsy ho fanaovana baranahiny ny mety ho fepetra raisina manoloana ireo izay manao toeran-tsy zaka ho an'ny hafa anefa izany, satria ny mety ho famaizana sy ny fanampiana izay diso hiaiky ny helony dia efa fizorana sahady amin'ny tena lalam-pibebahana.
Tsy mora mandrakariva anefa ny manaiky indrindra rehefa mifanohitra amin'izay noheverina sy niainana mandritra ny taona maro ny fanapahan-kevitra tokony ho ekena. Mitaky fandavan-tena izany ary tokony hotsroana mandrakariva fa i Kristy no ohatra, Izy ilay nanaiky hatramin'ny fahafatesana ho fanekena ny sitrapon'ny Ray. Ankoatra ny zavatra miharihary fa mifanohitra amin'ny Didin'Andriamanitra na amin'ny Lalàm-pikambanana na mety hiteraka voka-dratsy dia mety ho fihinanana am-bolony ihany ny fitsarana ny lehibe ho diso, raha ohatra ka samihafa ny fomba fijery ny toe-javatra sy ny lalana mankamin'ny soa iombonana. Ny lehibe koa anefa tokony ho mailo sao sanatria enti-pahazarana amin'ny "efa ho lava" sy ny "omaly tsy miova" ka manao baranahiny ny andraikitra hikaroka mandrakariva ny sitrapon'Andriamanitra, indrindra amin'ny fitozoana amin'ny fivavahana!
Ho tsaroana mandrakariva ary fa lalana ho amin'ny fikarohana ny sitrapon'Andriamanitra ny Voadin'ny Fanekena, ka tsy misy heviny raha sanatria ho fitadiavana ny mahasoasoa sy ny mahafinaritra ny tena ihany…
Mila ny fanampian'Izy Tompo sy ny vavak'Ilay Reny nanaiky ka tonga Renin'ny Famonjena isika. Mitalaho ny fankaherezan'ny Fanahy hiombom-po an-kafaliana hamaly ny iraka nankinina amintsika, hihay ny mahantra sy ho vavolombelon'ilay fitiavana tsy misy fetra.